बच्चाहरु र साझेदारी एक साथ साथ | बच्चाहरू त्यहाँ छन्
समय लिनुहोस् र आफैलाई नयाँ जोडीको रूपमा खोज्नुहोस्
शौकहरू र मित्रताहरू कायम राख्नुहोस्!
सुरुमा तपाईं अझै पनि प्रेममा हुनुहुन्छ, सबै कुरा यो हुनुपर्छ जस्तो हुनुपर्छ। सिनेमा रातहरू, मोमबत्ती रोटी डिनरहरू र आइतबार बिहान तपाईं निस्कन सक्नुहुन्छ। त्यसैले समानुपातिक एकताबद्ध, परिवार नियोजनको बाटोमा केहि पनि छैन।
छोराछोरी र साझेदारी सँगसँगै ल्याउने
तर मोटो अन्त्य अन्त्यमा आउछ: अविवाहित रुपमा सम्बन्ध सन्तान जन्मे पछि मात्र पहिलो वर्ष असफल हुन्छ। बालबालिका चिन्ता, झगडा, सुत्न रातहरू, यो सबै भन्दा बढी दु: खीको तुलनामा बहिनीहरूसँग संदिग्ध हुन्छन्। तैपनि सबैले भनेका छन् कि बच्चाछोरी सानो हुँदा सबै भन्दा सुन्दर मध्ये एक हो।
ब्याट्री साझेदारी र परिवार
सबैलाई पहिला उनीहरूको नयाँ भूमिकामा प्रयोग गर्नु पर्छ
बच्चाको जिम्मेवारी लिनको लागी। यो सिर्फ सानो चीजहरू होइन जुन जवान परिवारलाई परेशान गर्दछ। एक बच्चाले पनि सम्बन्धमा तपाईंको भूमिका परिवर्तन गर्दछ। अचानक, तपाईं अब एक मित्र हुनुहुन्न, एक पति वा पत्नी, तर आमा वा बुबा, र तपाइँसँग अन्य जिम्मेवारीहरू पनि छन्।
यदि स्त्री घरमै रहन्छ भने, मानिसको अब उसको पत्नी र बच्चाको हेरविचार गर्नु पर्छ। धेरै पुरुषहरूले यस ज्ञानलाई दबाबमा राखे किनभने एक कामस्थल आजको रूपमा आत्म-स्पष्ट जस्तो होइन। महिला, अर्कोतर्फ, यो निर्णय गर्न को लागी कि तपाईको सम्पूर्ण बच्चाको हेरचाह वा केहि निश्चित समय पछि काममा फर्किनु, र बच्चालाई क्रेचमा लामो समयसम्म राख्नुको लागि पूर्णतया समर्पित गर्नु हो।
यदि उनी आफ्नो सन्तानको लागि त्यहाँ निर्णय गर्ने हो भने, उनी आफ्नो अघिल्लो पहिचानको एक टुक्रा बलिदान गर्छन् र पूर्णतया नयाँ परिस्थितिको अनुभव गर्छन्। सबै यस समयमा सधैँ रसिलो छैन, भित्री आमाले उनको भूमिकामा खुसी महसुस गर्दछन्। रातोपन बच्चाहरु कोलोक वा पहिलो सानो दाँतको कारण रोइरहेछ, साझेदार, अनिश्चितता संग तनाव, यदि तपाईं सबै कुरा सही गर्नुहुन्छ, र हार्मोन परिवर्तन पनि भूमिको लागि प्रदान गर्दछ।
नयाँ बुबाको दैनिक जीवनले आमाको रूपमा गम्भीर परिवर्तन गर्दैन। तथापि, जब घर आउँदछ, उनी निकै राम्ररी राम्रो छ "नमस्कार प्रिय, तिम्रो दिन कस्तो थियो?" तर शायद उनी आफ्नो कष्टप्रद पत्नीबाट प्राप्त हुन्छ, बिना टिप्पणी बिना, सन्तानहरू आफ्ना हतियारमा थिईन्।
सामान्यतया, उनको आँखामा, पहिले नै उनको हेरचाह गर्ने स्त्रीले पूर्ण परिवर्तन गरेको देखिन्छ। प्रायजसो पुरुषहरूले पनि सन्तानलाई ईर्ष्या गरे। बच्चा पहिले पहिला आउँनेछ - र त्यसैले यो हुनेछ जब सम्म बच्चाहरु बचाइयो।
पहिला जवान पिताहरूले यसलाई प्रयोग गर्नु पर्छ। यहाँ यो धेरै धैर्य, साहस र एक सहिष्णुता सहिष्णुता लाग्छ, ताकि विवाह असफल हुँदैन। धेरै कमजोरीहरू बच्चाहरू जसले तीन हप्ता पछि नै सुत्छन्!
केहि समय पछि, एक सामान्यतया आफैले नयाँ भूमिकामा बढी वा कम पाउँछ र एक जोडाको रूपमा स्वीकार गर्दछ, कसैले आफैलाई पनि पूर्वनिर्धारित गर्नुपर्छ। त्यसकारण, सबै युवा आमा र बुबाले नियमित रूपमा आफैलाई व्यवहार गर्नुपर्छ - र आदर्श सुरुको साथ। निस्सन्देह त्यहाँ हजुरबुबाहरू हुन् जुन जसले एक पटक एक पटक निस्सन्देहको भूमिका लिन्छ, अझ दुई पटक अझ राम्रो हुन्छ। यदि यी साइट साइटमा जिउँदैन भने, तपाईं परिचित सर्कलहरूमा सुन्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देही कसैले कसैलाई एक विश्वसनीय दाई जान्दछ कि धेरै महंगी छैन।
वा जवान परिवारहरूले एक-अर्कालाई एकअर्कालाई समर्थन गर्छन्। सम्भवतः कसैलाई कसैले बच्चाको हेरचाह गर्न प्रस्ताव गर्दछ। यहाँ कुनै पनि मद्दत लिनुहोस्! लामो साझेदारीमा यो साझा समयबाट साझेदारी लाभ।
एक साझेदारीमा, सबैको लागि उनीहरूको सन्तानको बावजुद सबैको आफ्नै शौकको लागि समय हुनुपर्छ। यहाँ, साझेदारहरू सँगै आउँदछ, किनकि जब तपाईं आफ्नो शौकहरू पछ्याउनुहुन्छ, शरीरले तनावलाई मुक्त गर्दछ र तपाईंको ब्याट्री रिचार्ज गर्न सक्छ। समान साथीहरूको सर्कलमा लागू हुन्छ। प्रायः दीर्घकालीन मित्रताहरू आमाबाबुको समयको बाधाबाट पीडित हुन्छन्, खासकर यदि साथीहरूसँग अझै पनि छोराछोरीहरू छैनन् र बुझ्न सक्दैनन् कि कहिलेकाहिँ साँझ एक लामो समय कुरा गर्न थकित हुन्छ।
बालबालिका र साझेदारी
यहाँ पनि: निश्चित समय अनुसूचित गर्नुहोस्। A: "केही समयपछि हामी भेट्न सक्छौं" कसैलाई सहयोग गर्दैन। विशेष गरी साथीहरूसँग र भेटघाटको खेती अक्सर धेरै छोटो छ, यहाँ तपाईले आफ्नो पहिचानमा एक टुक्रा पाउनुहुनेछ। एक जवान परिवारको महान कला यस प्रकारको रोजगारीको जीवनको बावजूद, जुन पनि तपाईंको प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्न र तपाईंको ब्याट्रीहरू रिचार्ज गर्न द्वीप प्रस्ताव गर्न अविस्मरणीय क्षण छ।
यदि यो सबै मद्दत गर्दैन वा पर्याप्त समय बाँकी छैन, यो पनि एक पेशेवर बाट मद्दत प्राप्त गर्न अर्थ बनाउन सक्छ। मनोवैज्ञानिकहरु प्राय: विवाह को परामर्श प्रदान गर्दछ जुन चाँडै कारण, अंतर्निहित समस्या को थाहा हुन्छ। निस्सन्देह, जोडेहरू आफैमा काम गर्नुपर्छ। तर यदि उनीहरूको सम्बन्ध केहि लायक छ भने, तिनीहरूले लुकेको लुकाउन र रोजगारीको जीवन झन्झटका साथ लिनु हुँदैन। किनभने, निस्सन्देह, समस्याहरूको दोषीहरूलाई यो सन्तान होइन, तर तनावको सामना गर्न आमाबाबुको क्षमता।